Kayar = Inbadan | Martech Zone
Arbacada, Agoosto 10, 2005 Sabtida, Oktoobar 18, 2014 Douglas Karr
Waxaan doonayay inaan raaco kuwayga Furan = Kobaca dheji muddo Lagu sharraxay boostadaas waa suurtagalnimada guul marka dadweynuhu xoogga saaraan sida xallintooda loogu dhexgeli karo xalalka kale. Waxaa jira dhinac dhinac u rogan oo tan ah, taasna waa in shirkadaha ay ku xaddidaan shaqeynta xallintooda aasaaska sida loo isticmaalo. Ku darista badeecooyin badan, adeegyo, iyo astaamo ayaa khatar noqon kara.
Barnaamijyayaashu waxay ugu yeeraan 'boodh'.
'Creep' waa qarowga horumariye kasta. Waxay dhacdaa marka qorshe horumarineed oo adag aan la ilaalin loona hoggaansamin. Astaamaha ayaa sii socda gurguurato ilaa mashruuca uu ilaa iyo hada xakamaynta ka baxaayo oo uusan waligiis dhamaanayn. Ama kaaga darane, way dhamaatay oo waxay leedahay xaddiga dhiqlaha ah ee aan laga gudbi karin.
Waxaan soo gudbin lahaa in shirkadaha, iyo wax soo saarkooda iyo adeegyadooda sidoo kale ay ku dhici karaan 'boodh'. Adiga oo aan ku xadidnayn shirkadaada iyo wax soo saarka iyo adeegyada meheraddaada aasaasiga ah, waxaad bilaabeysaa inaad cayrsato qaanso roobaadka, adigoo u maleynaya inay jirto lacag lagu heli karo halkan ama halkaas. Si kastaba ha noqotee, waad iska indhatireysaa inaad aragto waxyeelada ay ku leedahay ganacsigaaga 'diiradda, diiradda shaqaalahaaga iyo aqoonta, iyo sidoo kale culeyska dheeraadka ah ee ay ku hayso wax soo saarka, taageerada, gaarsiinta, iwm.
Mar kasta oo aad go'aansato inaad fiiriso alaabooyin dheeri ah, adeegyo, ama astaamo, fiiri haddii ay jirto shirkad horeyba halkaas u jirtay oo siisa iyada oo qayb ka ah aasaaska ganacsigooda. Ma ka fiicnaan kartaa iyaga? Shirkaddaadu ma taageeri kartaa taas oo sii wadi kartaa inay sii wado khibradda xuduntaada? Shaqaalahaagu ma rabaan inay taageeraan?
Dhamaadka, cayrsashada qaanso roobaadka ayaa laga yaabaa inay uun ku jebiso.
Tags: horumarinta dalabkaboodhmuuqaalka gurguurtamuuqaaladayarfudud